Vizrt Group dia manakarama an'i Daniel Url hanamafisana ny fifantohan'ny mpanjifa amin'ny Fampivoarana ny vokatra | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Vizrt Group dia manakarama an'i Daniel Url hanamafisana ny fifantohan'ny mpanjifa amin'ny fampandrosoana ny vokatra
Vizrt Group dia manakarama an'i Daniel Url hanamafisana ny fifantohan'ny mpanjifa amin'ny fampandrosoana ny vokatra
Vizrt Nanambara ny vondrona androany fa niditra tao amin'ny orinasa i Daniel Url ho Head of Global Product Management izay nitory tamin'i Michael Hallén, CEO sy ny filoha.
Vizrt Vondrona dia ivon-toerana mifototra amin'ny votoatiny ary tanjona kendrena hanampiana ireo mpitantara ny tantaran'izao tontolo izao hamoaka tantara maro, araka ny fitantarany tsara kokoa. Daniel dia Tale Mpitantana sy Lehiben'ny Sales Sales an'ny Qvest Media nandritra ny 11 taona mahery nanara-maso ny varotra tetikasa anisan'izany ny fametrahana ny Vizrt vokatra ao amin'ny Sky Sports Munich, ORF Vienna, Nine Network Sydney, ary maro hafa.
Miaraka amin'ny sehatra matanjaka amin'ny fampivoarana ny vokatra haitao haino aman-jery, ny alàlan'ny famokarana ary ny varotra, i Daniel dia hiantoka ny marika ao amin'ny Vondrona; NewTek, Vizrt, ary NDI®, dia hitondra amin'ny fanavaozana ny tsena izay mifantoka hatrany amin'ny valin'ny mpanjifa. Qvest Media, toy ny mahazatra, dia mijanona ho mpiara-miasa lehibe amin'i Vizrt.
Daniel Url nanao hoe: “Mpankafy an'i Vizrt nandritra ny taona maro ary amin'ny maha mpino mazoto ny herin'ny rindrambaiko, IP, ary ny haitao rahona hanova ny fomba fizaran'izao tontolo izao ny tantarany ho tsara kokoa. Tsy afaka mieritreritra toerana tsara kokoa aho. ”
Url sy ny ekipan'ny Product Management dia hiara-hiasa akaiky amin'ny asan'ny R&D tarihin'i Dr. Andrew Cross, filohan'ny R&D ho an'ny Vizrt Vondrona, mamorona ny fahaizan'ny fampandrosoana ny vokatra ao amin'ny Vondrona. Raha atambatra, ny mpivady dia hampiroborobo ny fifantohana amin'ny fanomezana lanja ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanavaozana amin'ny vokatra sy ny traikefa ahafahan'ny vondrona manohy mifantoka amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa.
Michael Hallén, CEO an'ny vondrona ary filoham-pirenena nanao hoe: “Faly aho fa afaka nitondra ny zavatra niainan'i Daniel sy ny fahaizany Vizrt Fianakaviana vondrona. Manana drafitra mampihetsi-po be dia be izahay amin'ny ho avy ary manamafy ny asa fampandrosoana ny vokatra amin'ny fomba izay hanampy anay hanompo ny mpanjifantsika, ary ny atiny tsara kokoa no ivon'izany. "
Ny traikefa sy ny fahazoan'ny mpanjifa mifantoka amin'i Daniel dia hanamafy ny Vizrt Ny fanoloran'ny vondrona ho an'ny taranaka manaraka ho an'ny fitaovana fanaovana tantara an-tsary nofaritana rindrambaiko izay tsy voafehin'ny fitaovana intsony, ahafahan'ny mpanjifa milaza ny tantarany, tsara kokoa.
Previous: Manampy ny famaranana ny “Save the day” i Pace Pictures
Next: Light Iron dia manitatra vahaolana vaovao ho an'ny fiaraha-miasa lavitra